Ireo antony tena mampikentrona ny tarehy
Inona ny « BB Crème » mety amin’ny hoditro ?
Efa tsy zoviana amin’ny maro loatra intsony ny « BB Crème » amin’izao vaninandro iainantsika izao.
Eye-liner : Inona no manendrika ny masonao?
Manana ny fitsipika sy ny lalànany koa ny fanosorana ny « eye-liner ». Tokony atao manaraka ny firafitry ny maso izany mba hitondra fanovàna amin’ny tarehy.
Mampirongatra mony ny rarin-tsaina …
Marobe ny antony mety hahatonga ny mony hipoitra eo amin’ny tarehy. Ny rarin-tsaina na ny “stress”
« Anti-rides » natoraly, azo amboarina ao an-trano
Azo atao tsara ny manafina ireo kentrona madinika eo amin’ny tarehy. Tsy voatery hividy akora eny an-tsena aza fa afaka manamboatra ny « anti-rides » manokana ho anao ao an-trano.
Mamaritra volomaso mifanaraka amin’ny endrika
Azo lalaovina sy haingoina hanova ny endrika ny volomaso eo amin’ny handrina. Rehefa hanamboatra volomaso, noho izany dia mila mitandrina tsara, sao mifanipaka amin’ny endrika andrasana no fivoakan’ny tarehy. Na ny endrik’ilay nanamboarana azy, na ny hateviny, dia samy zava-dehibe avokoa. Manana ny lamaodiny koa anefa izy ireny.
« Pédicure » tsotra kely vita ao an-trano
Na ririnina aza ny andro ka somary tavela ny kapakapa mampiseho tongotra, dia tsy maintsy kolokoloina foana ny tongotra. Azo atao tsara ny mikolokolo azy ao an-trano, na ireny antsoina hoe « pédicure » ireny. Dingana 3 ireto atoronay anao ireto.
Ireo sakafo 5 mana-antitra haingana be
Isan’ireo fambarana havizanana mitarazoka ny firorahan’ny tarehy, ny fiovan’ny lokony ho lasa matroka, ny kentrona, sy ny maro hafa.
Manaratsy endrika ny kentrona. Fihetsika tsy voatandrina fotsiny dia efa mety hahatonga ny fipoirany. Ireto no tsara ho fantatra mahakasika azy ireny sy ny fomba fiarovana ny tarehy amin’ny kentrona.
Betsaka ireo fototra manosika ny fipoiran’ny kentrona amin’ny tarehy :
· Ny fandrosoan’ny taona, izay miankina amin’ny karazan-koditry ny tsirairay koa ny maha-betsaka azy na tsia ary mety hanaranaka ihany koa.
· Ny hain’andro.
· Ny tsy fahampian-drano ka manamaina ny hoditra.
· Ny adin-tsaina na harerahana be loatra.
· Ny fampiasana akora tsy mifanaraka amin’ny hoditra, ka mampikentrona azy mialohan’ny fotoana.
· Ny tsy fahampian’ny fiarovana azy amin’ny rivotra sy ny loto.
Tsy ampy menaka
Rehefa tena dinihina dia ny tsy fahampian’ny menaka amin’ny hoditra no mahatonga azy hikentrona. Manampy trotraka izany ireo singa avy ety ivelany : tsy fahampian-drano, loto…
Manatona matihanina, na dia tanora aza
Mila arovana amin’ireo singa ety ivelany ny hoditra. Mba hahafahany miaro-tena dia tokony hihinana sakafo ara-pahasalamana, hisotro rano amin’ny fatra atonony ary miala voly kely. Tokony akora mifanaraka amin’ny hoditra ihany koa no ampiasaina. Ankoatra izay, mila mikarakara hoditra eny amin’ny matihanina, mialohan'ny fipoiran’ny ketrona, eny fa na dia mbola tanora aza.
Otra mampihemotra ny kentrona
Ity otra ity no ataovy any an-trano mba hampihemotra ny fipoiran’ny kentrona. Somary tsongotsongoy isan’andro ireo faritra mikentrona, mba hikorian’ny rà tsara.
Akora tsara ampiasaina
Ho an’ny mariky ny akora indray dia mila atao mifanaraka amin’ny karazan-koditra no ampiasaina. Ny tena mikolo ny hoditra dia ireo ahitana singa “coco”, zavoka, “elastine”, “collagène”, ary ireo “sérum” isan-karazany arakaraky ny hoditra.
Isaorana i Ambinintsoa Rasoanaivo, Beauty And’Ntsoa Faravohitra. Fifandraisana : 033 11 276 98